With zvose kuremekedza ako zvakavanzika, isu zvinoda ruzivo hapana pachako uri kana kushanyira blackjack77zimbabwe.com. Asi, kana muupenyu kana munhu Kubvunzisisa chigadzirwa-chokuita kana mukufamba kutengeserana pamusoro Site ruzivo iwe zvinopa kunodzivirirwa kubva kunze komutemo kuwana uye iwe uchava nezvokufambira mashoko ichashandiswa. Mashoko pazasi rinotsanangura mashoko zvinoitwa pamusoro Site.
The Statement chinofukidza munzvimbo dzose blackjack77zimbabwe.com riri pa blackjack77zimbabwe.com (the Site). Mashoko yave agamuchira maererano mashoko muunganidzwa zviito Site ndiwo mashoko inopiwa vanhu blackjack77zimbabwe.com, riri kunze kutengeserana, mabhizimisi kana mune vanhu (the Information).
Information isu (blackjack77zimbabwe.com) kuunganidza vangapinda mhando mbiri:
The Tracking mashoko, akaunganidza apo inodzidzisa navigates kuburikidza Site.
Personal Information inopiwa vanoshandisa pamusoro nokuzvidira hwaro.
Club ruzivo inounganidzwa ne Site kwaita uye nenhevedzano. The ruzivo inounganidzwa kuona nzvimbo basa, kuti akashanyira mapeji, nguva iri Site uye nzvimbo vashanyi vakanga hyperlinked kubva.
The Site anounganidza club mashoko ane kusazivikanwa hwaro. The Site haritauri kufambidzana chero Personal Information pamwe date ichi.
Tracking Information inounganidzwa ne paWeb server matanda uye makeke. Web Server logs kuunganidza mashoko pamusoro basa yepaIndaneti. A kudzayi ndiwo mugove mashoko inoshandiswa club, authenticating uye kuramba kunyanya mashoko pamusoro Site vanoshandisa (nzvimbo zvaunofarira etc.). blackjack77zimbabwe.com inocherechedza achidzokorora uchishanyira vanhu Site vachibatsirwa makeke. makombiyuta Yevashanyi vanotumirwa makeke, pasina nekunhonga ruzivo chero munhu pamusoro achiputa pakombiyuta, kana zvakananga inopiwa inodzidzisa pachake pamusoro nokuzvidira hwaro.
Tracking Information rinoshandiswa kuvandudza Site magadzirirwo uye kugutsikana nokuongorora nhamba kushanya.
By Personal Information isu aireva rokushandisa zita, e-mail uyewo mashoko yokuwedzera kuti haisi kwairayirwa. Personal Information inogona vakaungana vamwe Site mapeji kana mueni achida kubvunza blackjack77zimbabwe.com mubvunzo online, kana kudhanilodha software, kana kuisa imwe kuti chipeto.
Uyezve, Personal Information rinogona vakaungana sechikamu mumakwikwi chikumbiro.
The Personal Information rinoshandiswa kuti kusimudzirwa, vaitarira zvinangwa, kusanganisira asi hakungoitwi ongororo uye ziviso pamusoro vakundi.
Images ari Information
The Information inopiwa kuna Site rinoshandiswa hwokupa vanozvishandisa mutsva blackjack77zimbabwe.com mabasa uye / kana kushambadza kuti isu funga kufarira kuti user. The Information inogona kugoveranwa mukati vashandi, vamiririri, yakazvimirira Contractors kana zvimwe blackjack77zimbabwe.com akarondedzera / chokuita masangano uye / kana mabhizimisi vakaroorana vari kuita nokuda Site ane maonero kuzadzikisa uye / kana kutumira murayiro, rebheti kana mubayiro . zvemunhu haifaniri navo vasiri blackjack77zimbabwe.com nzvimbo, kana vaiona zvakakodzera sezvo kana kupedzisa mutengapwe yenyu. blackjack77zimbabwe.com hatizombotorwi mutoro oga mitemo vamwe nzvimbo, uye mashizha izvozvo pasi chibvumirano chavo kurapa pachavo mashoko sezvo zvakavanzika bhizimisi ruzivo pamwe nokunzwisisa kuti anogona uye irege kushandiswa zvimwe vamwe pane kuita kwavo kwezvinangwa chaizvo uye yakananga basa.
User kudzoka e-mail kero zvinoshandiswa kutumira mhinduro e-mail uye mibvunzo zvatinowana uyewo kupa reserved yemabasa, uye udza pamusoro mamwe kushambadza uye zvinowanika.
Personal Information dzifukurwe kana zvakakodzera kuita mutemo, kana isu mukutenda zvakanaka vanowana i.e. ari kuita zvakakodzera, kuti iteererwe kana kushandisa Terms uye Conditions, kudzivirira kodzero, kuchengeteka kana midziyo blackjack77zimbabwe.com.
blackjack77zimbabwe.com asingachengeti kudzivirira kubata kutenga / kutengesa yedu / mamwe makambani 'yesangano mukufamba kwenguva. The kwema zvemunhu mutsa maonero vashanyi 'sezvo bhizimusi twa chete. Uyezve, mashoko anogona kuchinjwa pakuparwa kana apo blackjack77zimbabwe.com kana zvose zvayo ndeizvi akatenga kana pasi liquidation mu kusauka.
Zvikuru nyanzvi kuchengeteka hurongwa zvinoshandiswa kudzivirira kunze komutemo kuwana, kuramba mashoko zvakarurama uye pave kushandiswa kwakarurama mashoko. Hurongwa rakashandiswa pana nzvimbo iyi zvinoenderana azvino chibatiso mitemo uye zvinosanganisira anodiwa zvemagetsi, mumuviri, uye managerial dzokuvhiya, izvo rubatsiro kudzivirira mashoko yakaunganidzwa paIndaneti uye kuitira uye hunovimbisa kushandiswa kwayo kwakarurama.
Kunyange zvakadaro, nokuti kuti hapana mashoko anogona vanotombozvidya paIndaneti, hatingadaro zvinovimbisa kuti chero mashoko pasi wedu kuwana zvachose kuchaita uye vakachengeteka. Users anopa mashoko dzavo hatiripe. blackjack77zimbabwe.com nguva dzose Anoongorora uye anoyera nemano michina mitsva nokugovera mamwe kudzivirira mashoko.
Access kuna Personal Data
The Personal Information inopiwa kwatiri haifaniri kushandiswa kana kugoveranwa kutoti zvimwe zvatinoudzwa zvinotevera Statement. Kana iwe hauchafambi chido kugamuchira mashoko kubva blackjack77zimbabwe.com, tapota tinya pano kuti Unsubscribe.
Kodzero Change Privacy Statement
blackjack77zimbabwe.com akabata uye kwakachengetwa kodzero kurishandura Statement ichi chero nguva. Changes achava kunobudirira kodzero pamusoro nokuisa pamusoro Site. Last updated musi February 24, 2009. Kwaiva havashanduki akaita pafuma Statement ichi.